Halong Bay, kaadi akwụkwọ ozi Vietnam | Akụkọ Njem
La Halong n'ọnụ mmiri dị n’ime Vietnam, otu n’ime ebe ndị ama ama na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ebe maka ndị na-azụ ahịa akụ na ụba na ndị njem nleta karịa, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ụgbọ elu dị ọnụ ala mana ọ ga-abụrịrị na nlele dị mma ma dị ọnụ ala na-akwụ ụgwọ.
Halong Bay ọ dị n’ebe ugwu obodo ahụ, na-adịghị anya site na oke ala na China na dị kilomita 170 site na Hanoi, obodo ọzọ na-ewu ewu nke nwere ndị njem nleta. Kemgbe 2011 Halong Bay bụ otu n'ime ihe ọhụrụ Ebube asaa nke ụwa. Ka anyị chọpụta!
Halong n'ọnụ mmiri
Ugwu mmiri enyene banyere 1500 square kilomita ọ bụkwa ebe mara mma echedoro n’okpuru akara nke Ihe Nketa Worldwad kemgbe 1994. Ala gbara osimiri okirikiri na-ekpuchi kilomita 120 yana mpaghara ahụ dị nnọọ njem nleta, enwere ọtụtụ ihe enwere ike ịme ma kporie ndu n’ebe a.
Nwere ike iji ụgbọ mmiri njem, rie otu n'ime ụlọ nri dị n'akụkụ mmiri, gaa na ebe nkiri ya, gaa zụọ ahịa, nwee ọwụwa anyanwụ na-agaghị echefu echefu ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị ọzọ dịka kayak. Ka anyị bido site na njem.
na ụgbọ mmiri Ọtụtụ ụlọ oriri na ọ andụ hotelsụ na ndị ọrụ njem na-enye ha, ya mere, site na mmiri, mmadụ nwere ike ileba ọtụtụ puku agwaetiti ndị chọrọ ya mma, ụsọ osimiri ya mara mma, okwute limestone, ọdọ mmiri dị n'ime ya na ọbụna obodo niile e wuru na stil. Ọ bụ ya mere na ọ bụ World Heritage ya mere ndụmọdụ m bụ na ị na-eme ụfọdụ ụdị ụgbọ mmiri.
Enwere njem ụgbọ mmiri Hulong Bay maka ihe ụtọ niile, site na okomoko na ndị na-azụ azụ. Ọ bụ ya mere na ọ kacha mma ịghara ịbịa ma pụọ ​​n'otu ụbọchị, ị ga-anọ otu abalị. Ọtụtụ ụgbọ mmiri gụnyere a ndu ndu bekee ma ọ bụrụ na i were ha n'ọrụ site na họtel, ọ ga-agụnye nyefe, tiketi gaa na saịtị ndị na-ana ego maka ịbanye na ọbụlagodi ụfọdụ ihe ngosi inflight.
Ma, ọ bụrụ na ị nwere ego, e nwere ụgbọ njem nke ụbọchị abụọ na otu abalị. Maka ego ọzọ, ịchọ mma ndị ọzọ ị ga-ezute na kwa, enwere oge iji egwu mmiri, igwu mmiri, kayak ma obu ije ije.
Nkwụsị nke iwu nke ụgbọ mmiri bụ Agwaetiti Cat Ba nke nwere obodo ndi na-ese n'elu mmiri, ulo nri na ulo oriri na nkwari. N'etiti oké osimiri na ugwu na-acha akwụkwọ ndụ agwaetiti a mara mma, amaara nke ọma maka fauna ya. Ọ dị kilomita 28 site na Bai Chay Port na ọ bụ ebe kachasị ahọrọ maka igwu mmiri na mmiri ntakịrị n'ihi na ọ nwere nnukwu mmiri n'okpuru osimiri usoro coral, nnukwu ogbu mmiri na ọdọ mmiri isii dị n’ime. Enwere ike iji ụgbọ mmiri na-eleta ọgba ndị a na obere ebili ma ị nwere ike ịhụ enwe ọla edo na-awụlikwa elu ebe a.
Cruzọ njem ọzọ bụ Bo Hon Island, ama ama nke ukwuu maka ọgba ya. Bụ Hlọ Trinh Nu, Sung Sot Cave na Trong Cave, n’etiti ugwu, ugwu na oke ọhịa. Ọ bụ ebe dịtụ anya n'ihi na ị ga-eme njem ụgbọ mmiri elekere abụọ, na-ahapụ Bai Chay Port, mana ọ bara ezigbo uru n'ihi na njem ahụ na njedebe ya mara mma, akụkụ nke Halong Bay National Park, nke nwere osisi banyan, orchids na cycads.
Agwaetiti ọzọ dị n'ụzọ ahụ bụ Ti Top Island, dị kilomita asatọ site na Bai Chay Port. Titop, ọ bụ eziokwu na-atọ ụtọ, bụ aha ikpeazụ nke onye na-ahụ maka mbara igwe Soviet nke bịara leta ya na 1962. Osimiri ya dị egwu, na ime ụlọ, ájá dị nro na mmiri dị ọcha. Amen gị Ogige ntụrụndụ, Ogwe, ụlọ nri na ụlọ ahịa ebe niile. E nwere ọbụna steepụ 400-steepụ ruo ebe kachasị elu n'àgwàetiti ahụ maka nlele kachasị mma nke ihe niile.
Site ebe a ị nwere ike ịhụ dum Halong Bay, agwaetiti ya niile nwere ọnụ ọgụgụ ndị ọkụ azụ na ndị ọrụ ugbo. Obodo obula emegharịwo njem nlegharị anya ma na enye ugbua kayak, nleta ugbo ugbo, ịkụ azụ ma ọ bụ na-agagharị iji mara ndụ mpaghara. N'ikpeazụ, Halong caves nwere ibu nke ha ma họrọ ihe ị masịrị ịmara, ị nweghị ike ịhapụ ha: enwere Ọgba Dau Go ya na stalactites na stalagmites karịrị nde abụọ na afọ 20 elu.
Site n'ọgba a ị nwere ike ịme Njem njegharị nke oge 90 na ntuziaka asụsụ Bekee, Gaa na ngalaba ọkụ ya atọ, na-acha ọkụ ọkụ na nke artificial, wee rute obere ọdọ mmiri ya na mmiri doro anya nke dị na njedebe ụzọ. Ọ dị ka akụkọ ifo. Ọzọ bụ Trinh Nu Cave ma ọ bụ Cave nke Virgin nwere akpụrụ akpụ nke nwanyị nwere akụkọ nke ya (nke nwanyị a manyere ịlụ Mandarin).
La Sung Sot Cave nwere igwe foto abụọ na akụkụ 30 mita dị elu, na Bo Hon Island maka ozi ndị ọzọ, ma ọ bụ oku Nkume na isusu ọnụ o Isusu okwute, ezigbo akara nke Halong Bay, otu dị ka ọkpa, nke ọzọ na-ele ọkụkọ, na-ele ibe ya. Maka ndị obodo ha bụ akara nke ịhụnanya ebighebi ruo ọtụtụ puku afọ.
Na mgbakwunye na njem, Halong Bay na-enye gị ohere ịme ihe dị iche iche: were foto nke ọdịdị ala gị, igwu mmiri, ịkụ azụ, snọklị na kayak, ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ trekk. Eziokwu bụ na ọ bụ nnukwu ebe maka ndị na-arụ ọrụ, ndị na-achọghị ịnọdụ ala.
La Cat ba agwaetiti bụ ezigbo njem njem n’ihi na enwere ọtụtụ ụmụ anụmanụ na-adịghị ahụkebe ha ga-ahụ, enwe, mbe, na ụzọ dị iche iche aga. Also nwekwara ike ịgba ịnyịnya ígwè n'etiti obodo ha. Kpamkpam, na obodo Vietnam Hau, na nsọtụ njedebe nke agwaetiti a, ị ka nwere ike ịhụ ụlọ achara na ndụ ụmụ amaala.
Na nkenke, agwaetiti ndị kachasị ewu ewu bụ Dau Be Island, maka ịga ije na mmiri n'etiti coral na ọgba, Dau Go Island nwere ọgba ndị dị ebube, Cat Ba Island, ndị njem nleta, Bo Hon Island na Hung Sung Sot Cave, Cueva de la Virgen na Cueva del Pelícano na stalactites nghọta si akwa uko ụlọ na obodo mmiri na-ese n'elu mmiri nke a na-ahụkarị n'ọnụ mmiri ahụ, ihe ọzọ dị mma n'etiti ndị ọbịa.
N'ikpeazụ, ịnweghị ike ịhapụ akụkụ nke Vietnamnan na-enweghị anụrị ụtọ dịka Chukwu siri chọọ ya eriri afọ Mpaghara bara ọgaranya azu na azu ya mere oporo, oporo, na azụ dị na nchịkọta nhọrọ ọ bụla. Mgbe niile dị ọhụrụ ka ha jidere ha n’isi ụtụtụ n’ụtụtụ ma ebuba ha n’ụlọ nri niile. Ọtụtụ n'ime ha na-elekwasị anya na obodo Bai Chay, n'ihu ụsọ osimiri, mana enwere ndị ọzọ na-ejekwa ozi. Nri Vietnamese n'ozuzu ya na nri ndị China.
Ahụmahụ ikpeazụ m kwadoro bụ rie na ulo nri. E nwere ọtụtụ n'akụkụ Cat Ba Island na nri a na-enye anaghị adị ọhụrụ n'ihi na ọ ga-adị ndụ. Ọmụmaatụ? Restaurantlọ oriri na ọ Greenụ Greenụ Green Mango, nke nwere ọdụ ụgbọ mmiri, dị ezigbo mma na ọnụ ahịa nke ọkara. Nhọrọ ọzọ nke na-ahụ n'ọnụ mmiri bụ Huu nsị na maka nri ọdịda anyanwụ ịnwere ike ịnwale ụlọ oriri na ọ Barụ Noụ Noble House & Bar, nke dị n'etiti Cat Ba Island.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Halong Bay, Vietnam postkaadị